Muvhuro, June 11, 2018 Rekha Pant
Mazhinji mabloggi akawana vateveri nekutanga makwikwi. Izvi zvinowedzera kuvapo kwako pamhepo, uye unowana shanduko mune imwe nguva nekuti vashanyi vepeji rako vanofanirwa kuita chimwe chinhu kuti vagove chikamu chemakwikwi. Iwe unogona zvakare kushandisa uno mukana kusimudzira peji rako, uye kunatsiridza kwete chete izvo zvekuda uye zvekugovana asiwo mitengo yekutendeuka.
Kana iwe uchida kudzamisa ruzivo rwako nezve chimiro chevanhu vanoshanyira, kana kurongedza kupfuura zvakapfuura zvako zvinyorwa, bata mubvunzo uye mhinduro chikamu. Izvi zvinoshanda nekuti kunyangwe vachizvibvuma kana kwete, vanhu vanozvida chaizvo kana mumwe munhu akabvunza maonero avo. Chimwe chidikanwi chinozadzikiswa kana mumwe munhu akavabvunza kujekeswa. Iyi inzira yakanaka kwazvo yekuti urambe uchinzwisisa vanhu vari munetiweki yako uye nekuuya nemazano anozobatsira ako epamberi mamiriro.
Nezvose zviri kukurumidza-kumhanya, vanhu vave vasingashiviriri. Chikafu chinokurumidza chinotorwa zviri nyore pamusoro pekudyira kwakanaka nekuti vanhu havachadi kumirira chikafu chavo. Izvo zvinoenda kune izvo zvatinoisa online. Kana zvanyanya kutaura, vimba kuti vanhu vanongo pfuura nepfuura. Kugadzirisa izvi, chinja iyo chinyorwa mu infographic. Chimiro chekuona cheruzivo muchimiro chehuwandu hwehuwandu, data kana kuenzanisa zvinonyanya kunakidzwa nevaverengi, nekudaro infographic yakakosha. Zvekugadzira mifananidzo, unogona kudonhedza nemidziyo senge Canva uye uwane kurudziro pamaitiro ekugadzira infographics iyo isingobate chete kutarisisa, asiwo inowedzera kutendeuka.
Wese munhu anoda kuseka kwakanaka nguva nenguva uye saka isa maGIF maficha kana memes pese paunogona. Iwe unogona kuita izvi kuti utore imwe kuseka pane yako posvo. Zvino izvi hazvisi zvekungoseka vanhu; zviri zvakare zvekuratidza vanhu kuti unosvikika kuti une humwe mauri. Vanosekesa vanhu vanogara vari nyore kuwirirana navo. Iwe unozoshamisika nekukurumidza sei masheya uye shanduko zvinowedzera kana iwe uchinge waisa meme.
Ita shuwa kuti iwe pindura kumeseji uye makomendi ipapo ipapo. Vanhu vane yakaderera kutarisisa spans uye vanorasikirwa nechido kana mumwe munhu achitora nguva refu kuti apindure mibvunzo yavo. Kupindura meseji nekukasira, iwe unopa fungidziro yekuti uri kushinga online uye kuti iwe unokwanisa kuvapa zvavanoda chero nguva. Iwe unogona zvakare kumisikidza auto-mhinduro kuti vazive kuti iwe wakaona yavo meseji uye iwe uchavapindura kwavari iyo nguva iwe yaunowanikwa. Izvo zvichiri nani zvichienzaniswa ne "zvionekwa" zvinopinda pabhokisi remashoko nekuti izvo zvichavaita kuti vanzwe kuti urikuregeredza nemaune.
Funga nezvenhoroondo dzezvekudyidzana dzaunoteedzera. Sei uchivatevera? Iva mhando yemagariro enhau account yaunogara uchida kuwana zvinyorwa kubva. Gara uchiita hurukuro, uye taga vanhu vaunotora nekuti izvi zvichaita kuti vanzwe kuti unovakoshesa nekuvaremekedza. Isa premium pane zvakasikwa zvemukati, uye kusimudzira vamwe kunyanya kana iwe uchifunga kuti basa ravo ndechimwe chinhu chingafarirwa nevateveri vako. Ipa rupo nekugovana nyaya, nzwisiso, ruzivo, zvinhu zvinozove zvakakosha kune vateveri vako. Kana iwe usingatyi kusimudzira vamwe, vateveri vako vanonzwa izvi uye zvichavaita kuti vade kugovana zvaunotumira zvakanyanya.
Ndeapi Matanho Anonyanya Kubudirira Kuisa Inoshanda B2B Kukura Isu?